Ch 4 Ọrụ – 2azụ
Home / Bible / Ọrụ nke Ndịozi / Ch 4 Ọrụ
Ọrụ nke Ndịozi 4
4:1 Ma ka ha nọ na-agwa ndị mmadụ, ndị nchụàjà na ndị majie ụlọ nsọ na ndị Sadusii na-erikpu ha,
4:2 a na-mwute na ha na-ezi ndị mmadụ ihe na-ezikwa na Jizọs na mbilite n'ọnwụ.
4:3 Na ha tọrọ aka na ha, na ha na-etinye ha n'okpuru nche ruo echi. N'ihi na ọ bụ ugbu a mgbede.
4:4 Ma, ọtụtụ n'ime ndị nụrụ okwu kweere. Na ọnụ ọgụgụ nke ndị ikom ahụ wee puku mmadụ ise.
4:5 Ma ọ mere na-esote ụbọchị na ndị ndú ha na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ nwere nzukọ na Jeruselem,
4:6 tinyere Anas, nnukwu onye nchụàjà, na Kaiafas, na Jọn na Alegzanda, na dị ka ọtụtụ dị ka ndị nke ndị nchụàjà.
4:7 Na-eguzo ha n'etiti, ha ajụjụ ha: "Olee ike, ọ bụkwa aha onye, i meworo nke a?"
4:8 mgbe ahụ Peter, juputa na Mọ Nsọ, sị ha: "Ndị ndú nke ndị mmadụ na ndị okenye na, ege.
4:9 Ọ bụrụ na anyị taa na-ekpe ikpe site na a ọma n'omume mere adịghị nwoke, site nke ọ e mere dum,
4:10 ka amara unu niile na ndị niile na nke ndi Israel, na na aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst onye Nazaret, onye unu kpọgidere n'osisi, onye Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, site ya, nwoke a guzo n'ihu unu, ike.
4:11 Ọ bụ nkume, nke jụrụ ị, na-ewu ụlọ, nke ghọworo isi nkuku.
4:12 Na e nweghị nzọpụta ọ bụla ọzọ. N'ihi na ọ dịghị ndị ọzọ aha n'okpuru eluigwe nke e nyere ka ndị ikom, site na nke ọ dị mkpa ka anyị ga-azọpụta. "
4:13 Mgbe ahụ, ọ na-ahụ mgbe niile nke Pita na Jọn, ebe kwupụtara na ha bụ ndị na-enweghị akwụkwọ ozi ma ọ bụ mmụta, ha na-eche. Na ha ghọtara na ha na Jizọs anọwo.
4:14 Ọzọkwa, ịhụ nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa n'ebe ha, ha na-enweghị ike ikwu ihe ọ bụla na-emegide ha.
4:15 Ma ha nyere ha iwu ịdọrọ n'èzí, pụọ kansul, na ha meere n'etiti onwe ha,
4:16 si: "Gịnị ka anyị ga-eme ka ndị ikom a? N'ihi na n'ezie a ọha ịrịba ama e mere site na ha, tupu niile bi Jerusalem. Ọ bụ ìhè, na anyị na-apụghị agọnahụ ya.
4:17 Ma ghara ọ na-agbasa n'ihu n'etiti ndi, ka anyị na-eyi egwu ha ghara ikwu okwu ọzọ na aha a na onye ọ bụla. "
4:18 Na-akpọ ha ndị na, ha dọrọ aka ná ntị ka ha kwuo okwu ma ọ bụ na-akụzi na ihe niile n'aha Jesus.
4:19 Ma n'ezie, Pita na Jọn kwuru, sị ha: "Kpe ikpe ma ọ bụ dị nnọọ n'anya nke Chineke na-ege ntị gị, kama Chineke.
4:20 N'ihi na anyị na-enweghị ike na-ezere ikwu ihe na anyị hụrụ ma nụ. "
4:21 ma ha, egwu ha, zilaga ha, ọ hụrụ a ụzọ na ha nwere ike ha ahụhụ n'ihi na nke ndị mmadụ. N'ihi na ihe niile na-eto ihe e mere na ihe ndị a.
4:22 N'ihi na onye a na ihe ịrịba ama nke a na-agwọ e rụzuru bụ ihe karịrị afọ iri anọ.
4:23 Mgbe ahụ, enwe a tọhapụrụ, ha gara ha onwe ha, na ha kọrọ na zuru ihe ndị ndú nke ndị nchụàjà na ndị okenye gwara ha.
4:24 Ma mgbe ha nụrụ ya, ji otu, ha we welie olu-ha Chineke, ha we si: "Onyenwe anyị, ị bụ Onye mere eluigwe na ụwa, oké osimiri na ihe niile dị n'ime ha,
4:25 onye, site na Mọ Nsọ, site n'ọnụ ndị nna anyị Devid, ohu gị, kwuru: 'Gịnị mere mba a na-eweso, gịnịkwa mere ihe ndị e na-atụgharị uche na-enweghị isi?
4:26 Ndị eze nke ụwa guzo ọtọ, na ndú Igbere dị ka otu, megide Jehova, megide Kraịst ya. '
4:27 N'ihi na n'ezie Herod na Pọntiọs Paịlet, na nke ndị Jentaịl na ndị mmadụ nke Israel, Igbere n'obodo a megide ohu gị dị nsọ Jesus, onye i tere mmanụ
4:28 na-eme ihe aka gị na gị ndụmọdụ ama ebebiere ga-eme.
4:29 Ma ugbu a,, O nwe-ayi, anya ha egwu, nyekwa ndị ohu gị na ha nwere ike ikwu okwu gị obi ike,
4:30 site n'inye aka gị na ọrịa na ihe ịrịba ama na ọrụ ebube, a ga-eme site na aha nsọ gị Ọkpara, Jesus. "
4:31 Ma mgbe ha na-ekpe ekpere, ka ebe ahụ ha zukọtara kpaliri. Na ha nile we juputa na Mọ Nsọ. Na ha nọ na-ekwu na Okwu Chineke na obi ike.
4:32 Mgbe ìgwè ndị kwere ekwe nwere otu obi na otu mkpụrụ obi. Enweghi onye ọ bụla na-ekwu na ọ bụla n'ime ihe ndị o nwere bụ nke aka ya, ma ihe nile e nkịtị ka ha.
4:33 Na oké ike, Ndịozi ahụ na-ejere àmà banyere mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Na oké amara bụ na ha niile.
4:34 Dịghịkwa bụ onye ọ bụla n'etiti ha mkpa. N'ihi na ka ha nwe ala ma ọ bụ ụlọ, na-ere ndị a, na-eweta ihe ha retara nke ihe na ha na-ere,
4:35 na na ịtụkwasị ya n'ihu ụkwụ ndịozi. Mgbe ahụ, ọ ka e kewara onye ọ bụla, dị nnọọ ka o kwesịrị.
4:36 ugbu a Joseph, onye Ndịozi kpọkwara Banabas (nke a sụgharịrị ka 'nwa nkasi obi'), onye a Levite nke Cyprian nrida,
4:37 n'ihi na o nwere ala, ahụ o rere ya, O we me ka ha retara ma dọba a na ụkwụ nke NdŽozi.